Spicy pork ribs →
4 comments on “Pudding”
October 7, 2012 @ 12:07 am
Absolutely beautiful pudding. I like ceremal pudding.
October 7, 2012 @ 6:11 pm
ချက်နည်းက အရမ်းလွယ်လို့ အိမ်မှာ ဒီနေ့ ချက်ကြည့်တာ တကယ် စားလို့ကောင်းတယ်။ ၀ယ်စားဖူးတဲ့ ပူတင်း အတိုင်းပဲ။ ၄ နာရီ ကြာတာလေး တခုပဲ။ စားလို့ ကောင်းပီး ချက်ရတာ လွယ်တဲ့ ပူတင်း ချက်နည်း အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
I hope you will be stay safe hurricane Sandy!
Pingback: နို့ဆီခွက် ပူတင်းပေါင်း | Colourful Recipes